Word Monsters: ny lalao Rovio Stars vaovao, amin'ny antsipiriany | Vaovao IPhone
Angamba ny anaran'ny Rovio dia toa mahazatra anao, mivelatra amin'ny lalao lehibe toy ny Angry Birds na Angry Birds Go!; Ary ho fantatrao ihany koa ny mpamorona "faharoa", Rovio Stars, amin'ireo lalao malalaka kokoa amin'ny resaka tanjona toa ny Tiny Thief. Nandritra ity herinandro ity, ny orinasa faharoa an'i Rovio, Rovio Stars, dia namoaka ny lalao vaovaony ao amin'ny App Store: Word Monsters, lalao iray izay mampifangaro ny hafainganana, ny litera ary ny multiplayer. Vonona ny handehandeha miaraka amin'ny namanao amin'ny lasopy abidia mifototra amin'ny lohahevitra isan'andro ianao?
1 Word Monsters sy ny tanjon'izy ireo: mahazo isa betsaka kokoa noho ny mpanohitra anao
2 Volavola milamina, fa miaraka amin'ny dokambarotra Rovio (toy ny mahazatra)
3 Lalao Multiplayer ... ahoana raha tsy manana Internet isika?
4 Resy ireo mpanohitra matanjaka ary miditra amin'ny "The League"
Word Monsters sy ny tanjon'izy ireo: mahazo isa betsaka kokoa noho ny mpanohitra anao
Ny tanjon'ny World Monsters dia tena tsotra, tsy maintsy mahazo isa ambony kokoa noho ny mpanohitra antsika amin'ny lalao isika. Ny lalao tsirairay dia misy fihodinana 5 ary ao anatin'ireo fihodinana tsirairay ireo dia iray amin'ireo mpilalao misafidy ny lohahevitra izay handeha ny fihodinana. Vantany vao voafidy ny lohahevitra (, ny mpilalao nifidy, dia manatanteraka ny lasopy abidia izay ahitantsika teny mifandraika amin'ilay lohahevitra nofidina teo aloha.
Isaky ny faran'ny dingana tsirairay amin'ny lalao dia hasehon'ny Word Monsters amintsika ny isa azontsika ary avy eo, hasehony amintsika ny isa totalintsika izay azontsika tamin'ny lalao, miaraka amin'ny isa isaky ny mpifanandrina hafa. Ny tanjon'ny Word Monsters dia ny hahatratrarana isa avo kokoa noho ny mpanohitra hafa amin'ny famitana ny lasopy abidia haingana kokoa na fitadiavana teny maro kokoa noho izy.
Volavola milamina, fa miaraka amin'ny dokambarotra Rovio (toy ny mahazatra)
Ny iray amin'ireo zavatra tiako indrindra momba ny Word Monsters dia ny endriny, izay mitandrina tsara, mifototra amin'ny loko ary mazava ho azy, miaraka amin'ireo biby goavambe izay mametraka ny lalao ho an'ny ankizy mihoatra ny olon-dehibe. Ny bokotra dia manana loko roa toy ny sisa tavela amin'ny lalao, eny fa na dia ny biby goavam-be aza, izay mizara loko roa voafaritra tsara: ny iray loko matevina ary ny iray somary maivana kokoa noho ilay matevina.
Toy ny mahazatra amin'ny lalao Rovio Stars, betsaka ny dokambarotra momba ny lalao Rovio: Vorona tezitra, vorona tezitra! ary karazana dokam-barotra hafa amin'ny lalao hafa toy ny: Juice Cube, Tiny Thief ... Na eo aza izany dokambarotra kely miseho izany eo amin'ny efijery teboka foana, iray amin'ireo zavatra mazava nalain'ny Rovio Stars rehefa namorona World Monsters dia ny endrika.
Ny mpampiasa tsirairay dia monster izay azontsika atao amin'ny alàlan'ny faritra antsoina hoe: "Ny lambam-bolako".
Lalao Multiplayer ... ahoana raha tsy manana Internet isika?
Ny tena ifantohan'i Word Monsters dia ny lalao marobe ampidirina amin'ny alalàn'ny Facebook na Game Center raha mbola mamorona mpampiasa fanampiny tsy tratra ao amin'ny angona Rovio Stars isika. Tsy maintsy milalao olona iray foana isika, raha tsy mandany ny fotoanantsika amin'ny lalao fanazaran-tena hanatsarana ny fahaizantsika saingy malahelo iraka iray aho izay mahatonga ny lalao ho sarotra kokoa ary hahatonga ahy hanohy hilalao, izany hoe, iraka sasantsasany manao ahoana ianao
Zava-bita rehefa mahazo fanamby aho
Asa fitoriana vita (toy ny Candy Crush na Angry Birds)
Heveriko fa hanamboatra izany amin'ny fanavaozana ho avy izy ireo fa tsy maintsy ho hitantsika. Ny maodely lalao, mampalahelo ahy, no nankatoavina tamin'ny "Scratch 5" amin'ny Word Monsters, raha ny hevitro.
Resy ireo mpanohitra matanjaka ary miditra amin'ny "The League"
Misy karazana laharana eo amin'ny sehatry ny fanjakana (amin'ity tranga ity, Espana) izay i Word Monsters dia manome baiko ny mpilalao rehetra mifandraika amin'ny isan'ny fandresena ao anatin'ny fizarana "Ny ligy".
Ity laharana ity dia havaozina isan-kerinandro, noho izany dia ilaina ny mandresy ny lalao 9 isan-kerinandro mifandraika amin'ny ligy raha te-hampiakatra ny fizarana isika. Amin'izao fotoana izao dia misy fizarana 15 voalamina amin'ny sokajy: sangany, fizarana voalohany, fizarana faharoa, fizarana fahatelo, fizarana fahefatra ary fizarana fahadimy.
Raha te hiditra amin'ny toerana ambony an'ny "The ligy" isika dia zava-dehibe ny mandresy na mahazo ny isa ambony indrindra amin'ny lalao 9 isan-kerinandro omen'ny Word Monsters antsika amin'ireo mpilalao hafa ao amin'ny ligy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Word Monsters: ny lalao Rovio Stars vaovao, amin'ny antsipiriany